I-Semalt Expert: Ukuphucula ukuSebenza kweSayithi ngokungahambisani neeVeki zakho ezivela kwi-Google Analytics
Xa uhlola kwaye uhlolisise i-Google Analytics kwaye uqaphele ukuba kunokwenzeka ukuba ungabandakanyi ukutyelela kwakho, uthatha isigqibo esifanelekileyo. Kubaluleke kakhulu kwiiwebhusayithi ezingenanto okanye ezingekho zithuthi ngenxa yokuba uya kuqinisekisa ukuba uhlalutyo lwakho lubonisa iziphumo zemigangatho kuphela kwaye iindwendwe zakho zinomdla ekufundeni amanqaku akho kwiwebhusayithi.
Kwi-akhawunti ye-Google Analytics, kukho iinketho zokukhetha. Uyakwazi ukukhumbula iingcebiso ezilandelayo ezinikezwa ngu-Oliver King, Semalt Umphathi weMpumelelo weMthengi, ukukhuphela ukutyelela kwakho kwi-Google Analytics.
Icandelo leseva okanye i-backend method
Ngenye yeendlela ezimangalisayo kunye ezimangalisayo, kodwa ukuphunyezwa kwayo akulula kwaye kuza kuthatha ixesha elininzi kunye nemizamo. Iqulethe ukukhusela ikhowudi yakho yokulandelela yeGoogle Analytics ukuba ihlaselwe. Uya kufaka le khowudi kwi-HTM yewebhusayithi yakho kwaye ulungele izicwangciso ze-server ngokufanelekileyo. Le ndlela yindlela ekhuselekileyo kuba ayiyi kuvumela ukutyelela kwakho kubhalwe ngu-Google Analytics. Kananjalo unakho ulawulo olupheleleyo malunga no kutyelelo okumele kubalwe kwaye akufanelekanga. Ekugqibeleni, uya kulawulo lwakho lwezithuthi kwaye unokuphucula ukusebenza ngokubanzi kwewebhusayithi yakho ngokubanzi. Ngaphezulu, le ndlela makunokusebenzisa i-IPs kunye neekhompyutheni zekhompyutha ngaphandle kweyengxaki..Kufanelekile kwimibutho emikhulu kunye emininzi kunye nabantu ngabanye.
Ukuhlunga kweGoogle Analytics
Le ndlela iqulethwe ngamanyathelo athile kwaye kulula kakhulu kusetyenziselwa ngokusekelwe kwiiparitha kunye nokusebenza jikelele kwewebhusayithi yakho. Kufuneka ugcine iso kwiipilisi ze-IP, imithombo ye-domain, amagama ophando, kunye nezihloko zamaphepha akho ukuze uthole iziphumo ezilungileyo ngale ndlela. Inokwethenjelwa, iguquguqukayo kwaye indlela yeGoogle eyithandayo kakhulu. Oku kukuvumela ukuba ulawulo olupheleleyo kwiparitha ye-exclusion yesayithi lakho, kwaye ilungele nawuphi na ubungakanani bekampani okanye ishishini. Nangona abantu ngabanye banako ukusetha iidilesi zabo ze-IP kunye neendlela ngendlela engcono.
Nangona kungenye yezindlela ezilungileyo kunye nezifundo, kufuneka ucinge ngokungeza ii-cookies kwisayithi yakho ukukhusela nayiphi na ingxaki. Ngale ndlela, kufuneka ugcine idilesi ye-IP eyahlukileyo ukuze i-Google Analytics ikwazi ukwahlula kwii-IP ezingaqinisekiyo. Kubalulekile ukusebenzisana nazo zonke iintlobo zeipheqululwazi kunye nokusebenzisa iithalesi ze-IP ezinamandla kuphela, kubandakanywa iipilisi, iiptotops kunye namadivayisi eselula. Ngelo xesha, akufanele ulibale ukuba le ndlela ayibizi kangako njengoko kufuneka ubeke i cookies yokukhuphela kwiwebhusayithi yakho usebenzisa iziphequluli ezahlukeneyo kunye nezixhobo ezahlukeneyo. Oku kunokukhokelela ukuba uchithe imali eninzi xa uqesha umntu ngomsebenzi. I-Google Analytics ayizange ivivinye ukuthembeka kwale ndlela. Nangona kunjalo, inani elikhulu labantu lisayisebenzisa kwaye linika ithuba eliphezulu. Unokunciphisa zonke iingxaki ezinxulumene ne-Google Analytics yakho ngale ndlela, kwaye kulula ukwenza okanye ukususa izihlungi uze ulungise iikhowudi ze-HTML. Le ndlela ifanelekileyo kuphela kubantu kunye nemibutho emincinci Source .